Morna, karazana mozika avy any Cap-Vert, lasa vakoka manerantany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2019 9:37 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, English, Français, Ελληνικά, македонски, українська, Português
Cesaria Évora mihira morna. Pikantsary avy amin'ny mpisera YouTube – alcom34.
Nankatoavin'ny UNESCO ho toy ny Raki-tsarobidin'ny Lovan-tsofina sy tsy fanova Ananan'ny Zanak'olombelona ny Morna, mozika sy dihy nentim-paharazana any Cap-Vert.
Nambaran'ny Minisitry ny Kolontsaina ao Cap-Vert, Abraham Vicente tamin'ny 7 Novambra ny fanapahan-kevitry ny UNESCO :
Ry Kapo-Verdiana, voninahitra ho ahy ny manambara aminareo fa nankatoavin'ny komity teknikan'ny manam-pahaizan'ny UNESCO anio ho toy ny vakoka manerantany ny “morna”.
Iray amin'ireo mpiangaly fanta-daza indrindra an'io karazana mozika io ary nantsoina hoe “mpanjakavavin'ny morna” i Cesária Évora (1941-2011).
Hoy ny pejy ofisialin'ny UNESCO:
Azo avoatra ny morna avy any Cap-Vert izay manambatra ny feo, mozika, tononkalo ary dihy. Fanehoana mozika izay tsy manavakavaka ny lahy sy ny vavy izy io. Matetika olona iray ihany no mihira azy ary ampiarahina amin'ny zavamaneno manasongadina feon-gitara. Tamin'ny taonjato faha sivy ambin'ny folo no nipoirany, avy amin'ny fampifangaroana ny karazana mozika manana fiaviana afrikana matanjaka, ny landum ary ny feon-kira Eoropeana.
Hira milantolanto manana feo efatra ary mazàna mampiasa lamina lantom-peo klasika minora. Miantso fihetseham-po, mifandraika amin'ny lohahevitry ny fitiavana, ny faniriana, ny fijaliana, ary ny fankahalana ity hira ity. Amin'ny ankapobeny dia ho renao ny mozika mafana miaraka amin'ny sehatra tsotsotra izay hilalaovana ny “toccinas” malaza. Amin'ny alina malaza ‘Cap-Verdeana’ anefa no tena ahafahan'ny olona mandre an'io karazana mozika io.
Nanambara ny Ivontoeran'ny vakoka ara-kolontsaina ao Cap-Vert tao amin'ny pejy Facebook-ny hoe:
Hanaitra ny olona momba ny maha-zava-dehibe ny kolontsaina Kapo-Verdiana ary indrindra ny Kreola Kapo-Verdiana, amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fahatokisan-tena sy fireharehan'ny vahoaka manodidina. amin'ny fomba fanehoana kolontsaina samihafa ny fankatoavana ny Morna, araka ny Komitin'ny UNESCO.
Hihamafy ihany koa ny fifampikasohana ara-tsosialy, izay hitarika ho amin'ny fampandrosoana ny endrim-piaraha-miasa vaovao eo amin'ny tarika mpiangaly mozika, mpikaroka ary ny ivontoerampampianarana an'ny fanjakana sy tsy miankina.
Hanolotra fahafahana vaovao hifanakalozana fahalalana eo amin'ny taranaka sy ny mponina avy amin'ny faritra samihafa any amin'ny nosy sy ny vondrom-piarahamonina mpifindra monina ny fankatoavana sady hampiseho ihany koa ny fahasamihafana ara-kolontsaina momba ny mozika sy ny kolontsaina Atlantika.
Hahazo fankatoavana amin'ny fomba ofisialy avy amin'ny UNESCO amin'ny volana Desambra amin'ny lanonana any Kolombia ity fanapahan-kevitra ity.
Marobe ireo fanehoan-kevitra vokatr'izany fanambarana izany.
Hoy i Jaqui Marques da Silva, mponina ao an-drenivohitra Praia hoe:
Andro tsy hay hadinoina sy manan-tantara ho an'ny kolontsaina Kapo-Verdiana izao. Izay no antony mampirehareha antsika rehetra. Na dia natao ho antsika rehetra aza ny asa, satria fanehoana lehibe ny fanahy Kapo-Verdiana ny morna dia miarahaba an'i Abraão Vicente Stephanie Duarte Vicente sy ny ekipa rehetra izay niasa mafy mba hahatanteraka izany nofy izany aho. Ho an'ireo mpiangaly mozika, tsy misy ankanavaka, arahabaina avokoa ianareo rehetra ..
Efa tafiditra tao anatin'ny lovan'ny zanak'olombelona talohan'io fanambarana io ny morna ho an'i Manuel Viega, mpampita vaovao sady mpanao gazety:
EFA LOVAN'NY ZANAK'OLOMBELONA HO ANAY NY MORNA, TALOHAN'NY FANKATOAVANA AVY AMIN'NY UNESCO
Nambara ho vakoka iraisam-pirenena amin'ny fomba midadasika kokoa tamin'ny taona 2009 ny tanàndehibe tranainy satria i Cap-Vert no toerana niandohan'ny morna, ny kreola ary ny kreola antsika. Izay no nahatonga ny fanapahan-kevitry ny Komity Teknikan'ny vakoka manerantany hampiditra ny anaran'ny MORNA ao amin'ny lisitry ny vakoka manerantany izay fombafomba fankatoavana fotsiny ihany satria efa azy ankehitriny sy taloha izany anarana izany.
Tena zava-dehibe tokoa io torohevitra io fa ny fankatoavana an'ilay namorona ny Morna tamin'io asa famoronana io no tena zava-dehibe indrindra.
Milaza izany rehetra izany fa efa ela no nankalazako ny Morna ho toy ny Vakoka Manerantany. Enga anie ny tsirairay hankalaza miaraka amin'ny rehareha sy ny fitiavan-tanindrazana io zanaky ny kreola malalantsika io.
Ho an'i Jorge Martins, avo indrindra ny fanandratana ny kolontsaina Kapo-Verdiana:
Vaovao mahafaly! Nahavita dingana tena manan-danja iray hafa tamin'ny fanamafisana ny mari-panondroana azy i Cap-Vert.
Mendrika fankasitrahana ny kolontsaintsika ary mendrika ny ho arahabaina avokoa ny mpanakanto izay niady hatrany ho an'ny fiarovana, ny fampiroboroboana ary ny fanapariahana ny fomba amam-panao manankarena izay antsika!
Ho ela velona anie ny morna!
Aoka isika hiaina ny fomban-drazantsika manankarena !